Ihe kpatara ịkpọ asị eji akpọ Blackjack | Penguin Blog - pisklak.net
Ihe kpatara ịkpọ asị eji akpọ Blackjack | Penguin Blog
Ihe mere eji akpọ ịkpọ Blackjack asị
Blackjack bụ otu n’ime egwuregwu kachasị mma ị nwere ike igwu na otu n’ime egwuregwu ịgba chaa chaa kachasị amasị m. Ọtụtụ ihe banyere blackjack na-amasị m. Mana enwere ụfọdụ ihe m kpọrọ asị. Onweghị ihe m kpọrọ asị banyere blackjack na-egbochi igwu m egwu. Ma, ihe gbanwere otú m si egwu.
Edemede that a nwere ihe 6 ị ga-akpọ asị maka blackjack. Ọ gụnyekwara etu m siri mụta ime ihe 6 a. Ọ ka bụ egwuregwu mbụ ị kwesịrị ịtụle mgbe ịgba chaa chaa,n’agbanyeghị ihe ndị a.
Mwakpo 6 Id 5
Mgbe m malitere igwu ezigbo self explanatory blackjack, tebụl ọ bụla m hụrụ na-akwụ ụgwọ 3 ruo two maka blackjack. Eji mn’aka na ị maraworị Mana blackjack bụ ebe kaadị two mbụ gị bara uru 10 na otu ace.
May nwere ike ịhụ na ịkwụ ụgwọ 6 ruo 5 adịghị mma dị ka ịnweta 3 maka 2. Na nzọ $ 20 naanị ị ga-enweta $ 24. will ga-efu gị $ 6 maka Blackjack ọ bụla. oji.
Enweghị ezigbo iwu ọ bụla.
Na mgbakwunye t self ị ga-akwụ ụgwọ mgbe ị nwetara blackjack, enwere ọtụtụ iwu ndị ọzọ na egwuregwu nke blackjack. Ọchịchị blackjack ọ bụla nwere ike ịgbanwe ọtụtụ ihe ị na-eme ma ọ bụ tufuo ka ị na-egwu.
Imirikiti tebụl blackjack nwere ngwakọta nke ezigbo iwu na iwu ọjọọ. Mana casinos chọrọ ka ị gwuo egwuregwu blackjack nke enweghị ezigbo iwu, yabụ ha na-aga n’ihu na-enye egwuregwu ndị a. Dị ka ị mụtara na ngalaba gara aga, casinos nwere tebụl 6/5 n’ihi na ụfọdụ ndị na-eji ha. Ọ bụrụhaala na ndị na-agba chaa chaa blackjack na-aga n’ihu na-eji iwu ọjọọ egwu, ụlọ ịgba chaa chaa ga-aga n’ihu na-enye tebụl ndị a.
Insurance abụghị ihe ị na-ahụ.
Industrylọ ọrụ cha cha cha cha Ha na-etinye oge ha niilen’ịchọpụta ụzọ ndị ha si enweta egon’etiti ndị na-agba chaa chaa. Ha na-eji aghụghọ ọ bụla n’akwụkwọ ahụ.
Nke a dị ka akụkụ nke egwuregwu ahụ ma yie ka ọ bụ ezigbo nzọ. Nke a bụ otú sneaky casinos dị. Insurance bụ akụkụ nzọ na-enweghị ihe ọ bụla metụtara egwuregwu nkịtị.
Tụlee ihe mkpuchi bụ. O nweghi ihe jikọrọ aka gị. Ọ bụ nzọ n’akụkụ ma onye na-ere ahịa nwere kaadị ala nke bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị 10. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ahụ nwere blackjack ị ga-atụfu aka mbụ gị.
Mana nke a abụghị ihe na-eme mkpuchi mkpuchi. Ihe na – eme ka ọ ka njọ bụ na ọ na – akwụ naanị two ka 1 d e ndị na – ere ahịa na blackjack bụ 2.25 ruo 1. Nke a pụtara na mkpuchi na – abawanye uru nke cha cha. Dị ka ịkụ nzọ dị n’akụkụ, anaghị achọ mkpuchi.